Aza Mora Tezitra
HAMAKY AMIN'NY TENY Afrikaans Albaney Alemà Amharique Anglisy Arabo Armenianina Bichlamar Boligara Cebuano Chichewa Chitonga Cinghalais Danoà Efik Espaniola Estonianina Failandey Fidjianina Frantsay Grika Géorgien Hebreo Hiligaynon Holandey Hongroà Ibo Icibemba Iloko Indonezianina Iokrenianina Italianina Japoney Kantôney Nentim-paharazana Kikaonde Kinyarwanda Kirghiz Kirundi Koreanina Kroaty Letonianina Lingala Litoanianina Luvale Malagasy Maltais Mandarin Nentim-paharazana Mandarin Notsorina Masedonianina Myama Norvezianina Oromo Pangasinan Poloney Portogey (Brezila) Quechua (Ayacucho) Quechua (Cuzco) Romanianina Rosianina Sepedi Serba (Sirilika) Serba (Soratra Romanina) Sesotho (Lesotho) Setswana Shona Silozi Sinoa Kantôney Notsorina Slovaky Slovenianina Soedoà Swahili Swahili (Congo) Tagalog Tahisianina Tailandey Tetun Dili Tigrigna Tiorka Tok Pisin Tseky Tsonga Twi Vietnamianina Waray-Waray Xhosa Yorobà Zoloa Éwé
MATOAN-DAHATSORATRA | MBOLA MANDAITRA VE NY TOROHEVITRY NY BAIBOLY?
TORO LALAN’NY BAIBOLY: “Ny fahatezeran’ny tsisy saina dia avoakany daholo, fa mahatsindry fo hatramin’ny farany kosa ny hendry.”—Ohabolana 29:11.
“Tena olom-baovao aho izao!”
MAHASOA VE IZANY? Be dia be ny soa azon’ny olona tsy mora tezitra. Anisan’izany ny hoe salama tsara. Milaza mantsy ny Baiboly fa “mamelombelona ny vatana ny fo tony”, ary ‘ny fo falifaly dia manasitrana.’ (Ohabolana 14:30; 17:22) Asehon’ny fanadihadiana kosa fa ny olona masiaka sy mora tezitra dia mora andairan’ny aretina, indrindra fa ny aretim-po. Mbola maro anefa ny soa raisin’ny olona tsy mora tezitra, ankoatra ny hoe salama tsara.
I Cassius, ohatra, manaporofo an’izany. Lehilahy 30 taona mahery izy, ary mpiady aman’olona sy mora tezitra be taloha. Hoy izy: “Nahatsiaro tena ho tsy nisy dikany aho. Niova anefa izany rehefa nampihatra ny toro lalan’ny Baiboly aho. Niezaka nifehy tena aho rehefa tezitra, sady nianatra nanetry tena sy namela heloka. Raha tsy izay aho angamba efa nigadra. Tena olom-baovao aho izao!”
Lasa tsy mora tezitra intsony i Cassius, sady mahay mamela heloka
Maro no miteny hoe: ‘Ny sainao ihany no mitondra an’io. Izay mahafinaritra ny fonao atao!’ Mety tokoa ve anefa izany? Fantaro izay lazain’ny Baiboly.
Hizara Hizara Aza Mora Tezitra